Umaki: khulisa ukuguqulwa | Martech Zone
Umaka: khulisa ukuguqulwa
Ungawuqala Kanjani Umkhankaso Wokumaketha Isiginesha We-imeyili Oyimpumelelo (ESM)
NgoLwesibili, Septhemba 21, 2021 NgoLwesibili, Septhemba 21, 2021 Douglas Karr
Uma usebenzela inkampani enabasebenzi abangaphezu koyedwa, kunethuba lokuthi inkampani yakho isebenzise amasiginesha e-imeyili ukuphatha nokushayela ukuqwashisa, ukutholwa, ukuphakanyiswa, kanye nezinhlelo zokugcinwa kodwa ukwenze ngendlela engaphazamisi. Abasebenzi bakho babhala futhi bathumela ama-imeyili angenakubalwa nsuku zonke kumakhulu, uma kungenjalo izinkulungwane, zabamukeli. I-real estate kuyo yonke i-imeyili engu-1: 1 eshiya isiphakeli sakho se-imeyili yithuba elihle lelo
Nudgify: Khulisa ukuguqulwa kwakho kwe-Shopify Ngale Nkundla Yokuqinisekisa Ubumbano Lomphakathi
NgeSonto, Agasti 29, 2021 NgeSonto, Agasti 29, 2021 Douglas Karr
Inkampani yami, Highbridge, isiza inkampani yezemfashini ukwethula isu layo eliqonde ngqo kubathengi ekhaya. Ngoba bayinkampani yendabuko enikezela abathengisi kuphela, babedinga umlingani ozosiza abe yingalo yabo yezobuchwepheshe futhi abasize ngayo yonke imikhakha yentuthuko yabo yomkhiqizo, i-ecommerce, ukucubungula ukukhokha, ukumaketha, ukuguqulwa nezinqubo zokugcwaliseka. Ngoba banama-SKU anomkhawulo futhi abanawo umkhiqizo owaziwayo, sibaphoqile ukuthi baqalise endaweni yesikhulumi ebesilungile, esesabekayo, futhi
Ukuphuma: Khulisa i-ROI Yakho Yokumaketha Okuqukethwe ngokuqukethwe okusebenzisana
ULwesihlanu, May 14, 2021 ULwesihlanu, May 14, 2021 Douglas Karr
Kwi-podcast yakamuva noMarcus Sheridan, ukhulume ngamaqhinga amabhizinisi alahlekelwa uphawu lapho ethuthukisa imizamo yawo yokumaketha nge-digital. Ungalalela sonke isiqephu lapha: Ukhiye owodwa akhulume nawo njengoba abathengi namabhizinisi beqhubeka nokuziqondisa ohambweni lwamakhasimende abo kungukuqukethwe okusebenzisanayo. UMarcus ukhulume ngezinhlobo ezintathu zokuqukethwe okusebenzisana okunika amandla ukuziqondisa: Ukuzihlela ngokwakho - amandla wethemba lokusetha
Khuphula ukuguqulwa kwakho ngokulwa nalaba babulali abahlanu bokuguqulwa
NgoLwesibili, Agasti 21, 2018 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Uma kunenkampani eyodwa online ethola ukuqapha nokukala amazinga wokuguqulwa kunoma yikuphi ukuguquguquka, ngabantu baseFormstack! Sibe ngabangane, abalandeli, kanye nabasebenzisana neqembu iminyaka, futhi akulimazi ukuthi balapha e-Indianapolis! Le datha entsha ne-infographic evela kuFormstack ikhomba izingqinamba ezi-5 ezingalimaza kakhulu amazinga akho okuguqulwa: Ukubhaliswa Kwemidiya Yezenhlalo - yenza kangcono kakhulu kunamafomu wokubhalisa angenalutho. Empeleni, 87%
I-Fomo: Khulisa ukuguqulwa ngobufakazi bomphakathi
NgoLwesibili, ngoJuni 19, i-2018 NgoMsombuluko, Februwari 15, 2021 Douglas Karr
Noma ngubani osebenza esikhaleni se-ecommerce uzokutshela ukuthi into ebaluleke kakhulu ekunqobeni ukuthenga akuyona intengo, ukuthembana. Ukuthenga esizeni esisha sokuthenga kuthatha ukweqa kokholo kumthengi ongakaze athenge kusayithi ngaphambili. Izinkomba zokuthembela njenge-SSL enwetshiwe, ukuqapha ukuphepha komuntu wesithathu, nezilinganiso nokubuyekezwa konke kubalulekile kumasayithi ezentengiselwano ngoba ahlinzeka umthengi ngomuzwa wokuthi basebenza nge